၁. အခြိနျမှနျဖို့ ကွိုးစားပါ
နောကျကတြတျတဲ့သူကို ဘယျသူမှမနှဈသကျ ကွပါဘူး။ ကိုယျ့အပျေါယုံကွညျစှာ အပျနှံထားတဲ့ အလုပျတဈခုကို သတျမှတျတဲ့ နရေကျနဲ့ အခြိနျမှာ အဆုံးမသတျပေးနိုငျခွငျးက သငျ့အပျေါ လူတှေ အထငျအမွငျသေးစမှောပါ။ ဒီတော့ အလုပျတဈခုကို သတျမှတျထားတဲ့ အခြိနျအတှငျး ပွီးမွောကျအောငျ လုပျဆောငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
၂. အခြိနျကို ကောငျးကောငျးအသုံးခြ တတျပါစေ
ဘယျအခြိနျမှာ ဘာလုပျရမယျ၊ ဘယျအခြိနျမှာ ဘာကိစ်စတှေ ပွီးရမယျဆိုတာကို ပုံမှနျအစီအစဉျဆှဲထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒီတော့မလိုအပျပဲ စောငျ့ဆိုငျးရတာ၊ အခြိနျမီမပွီးတာ၊ မလြေ့ော့ပွီး မလုပျဖွဈတာတှေ ကငျးလှတျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၃. ဘာလုပျရမယျဆိုတာ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိပါစေ
ကိုယျ့တာဝနျကို ကိုယျကိုတိုငျ ရှငျးရှငျးသိမှ ကပြှေနျစှာ ထမျးဆောငျလို့ရမယျဆိုတာ သငျနားလညျထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပနျးတိုငျကိုသိမှ၊ လမျးစကို ရှာလို့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
၄. ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျခွငျး
လုပျငနျးခှငျဆိုတဲ့ နရောဟာလညျး လူအမြိုးမြိုးနဲ့ စိတျအထှထှေေ ကွုံတှရေ့တာကွောငျ့ လူတိုငျးနဲ့ လိုကျလြော ညီထှနေတေတျတဲ့ သငျ့ရဲ့စှမျးဆောငျရညျဟာ သငျ့လုပျငနျးအတှကျရော၊ သငျ့ဘဝကိုပါ တိုးတကျစနေိုငျ ပါတယျ။ "သငျ့ရဲ့ passion ကို professional ဖွဈအောငျ ဘယျလိုပွောငျးမလဲ"
သငျ့လုပျငနျးရှငျ၊ အထကျလူကွီးက ပေးအပျတဲ့တာဝနျကို ပွီးဆုံးအောငျထမျးဆောငျရမှာက သငျ့တာဝနျပါ။ ဆငျခွေ၊ ဆငျလကျပေးလို့ မရပါဘူး။ သငျ့အထကျလူကွီး အမြားစုက ရပေါတာပဲလိုခငျြတယျ၊ ရဘေူးပေါကျတာ မလိုခငျြဘူး လို့ဆိုကွမယျ့ လူတှေ မြားပါတယျ။ သူ့တို့အတှကျ အကောငျးမှနျဆုံး စှမျးဆောငျပွခွငျးက သငျ့အတှကျ တိုးတကျမယျ့ နညျးလမျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
၆. လူအမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျတတျပါစေ
သငျဟာ အလုပျခှငျမှာ လူအမြားနဲ့ မဖွဈမနေ ထိတှေ့ ဆကျဆံရတာကွောငျ့ လူတှနေဲ့ ပူပေါငျး လုပျဆောငျတတျခွငျးဟာလညျး လိုအပျတဲ့ အရညျအခငျြးတဈခုပါပဲ။
လုပျဖျောကိုငျဖကျ အခငျြးခငျြး ညီညီညှတျညှတျ ဆောငျရှကျကွခွငျးက လုပျငနျးရဲ့ ထုတျကုနျကို နှဈဆတိုးမွှငျ့စမှော ဖွဈပါတယျ။
ပငျြးရိလာတဲ့အခါ၊ ဖိစီးမှုမြားလာတဲ့အခါ လူတှဟော အလုပျလုပျခငျြစိတျ ကုနျခနျးလာ တတျပါတယျ။ ဒါကို အဖွဈမခံပါနဲ့။ အမွဲအလုပျလုပျခငျြစိတျမှေးမွူပါ။ ဒါဆို သငျဟာလုပျငနျးခှငျမှာ အမွဲတမျး တကျကွှလနျးဆနျးနတေဲ့ သူလို့ နာမညျကောငျးရလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
၈. မိမိ ပွောလိုကျတဲ့စကားကို အမွဲတညျအောငျကွိုးစားပါ
ယုံကွညျမှုဆိုတာ အခြိနျကွာကွာ ဆောကျတညျရတာမြိုးဖွဈပွီး၊ တဈခါပကျြပွားသှားရငျလညျး ဘယျတော့မှ ပွနျမရနိုငျတော့တာမြိုးပါ။
ဒီတော့ ကတိတညျသူတဈယောကျ၊ စကားတညျသူတဈယောကျ ဖွဈအောငျ ကွိုးစားပါ။ “တက်ကသိုလျ ကြောငျးသား/သူ တှအေတှကျ အသငျ့တျောဆုံး Laptop ၂ မြိုး”
၁. အချိန်မှန်ဖို့ ကြိုးစားပါ
နောက်ကျတတ်တဲ့သူကို ဘယ်သူမှမနှစ်သက် ကြပါဘူး။ ကိုယ့်အပေါ်ယုံကြည်စွာ အပ်နှံထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်တဲ့ နေရက်နဲ့ အချိန်မှာ အဆုံးမသတ်ပေးနိုင်ခြင်းက သင့်အပေါ် လူတွေ အထင်အမြင်သေးစေမှာပါ။ ဒီတော့ အလုပ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတွင်း ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၂. အချိန်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချ တတ်ပါစေ
ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်ရမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာကိစ္စတွေ ပြီးရမယ်ဆိုတာကို ပုံမှန်အစီအစဉ်ဆွဲထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့မလိုအပ်ပဲ စောင့်ဆိုင်းရတာ၊ အချိန်မီမပြီးတာ၊ မေ့လျော့ပြီး မလုပ်ဖြစ်တာတွေ ကင်းလွတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃. ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါစေ
ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်ကိုတိုင် ရှင်းရှင်းသိမှ ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်လို့ရမယ်ဆိုတာ သင်နားလည်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းတိုင်ကိုသိမှ၊ လမ်းစကို ရှာလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄. ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတဲ့ နေရာဟာလည်း လူအမျိုးမျိုးနဲ့ စိတ်အထွေထွေ ကြုံတွေ့ရတာကြောင့် လူတိုင်းနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေနေတတ်တဲ့ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ရော၊ သင့်ဘ၀ကိုပါ တိုးတက်စေနိုင် ပါတယ်။ "သင့်ရဲ့ passion ကို professional ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ"
သင့်လုပ်ငန်းရှင်၊ အထက်လူကြီးက ပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကို ပြီးဆုံးအောင်ထမ်းဆောင်ရမှာက သင့်တာဝန်ပါ။ ဆင်ခြေ၊ ဆင်လက်ပေးလို့ မရပါဘူး။ သင့်အထက်လူကြီး အများစုက ရေပါတာပဲလိုချင်တယ်၊ ရေဘူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး လို့ဆိုကြမယ့် လူတွေ များပါတယ်။ သူ့တို့အတွက် အကောင်းမွန်ဆုံး စွမ်းဆောင်ပြခြင်းက သင့်အတွက် တိုးတက်မယ့် နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၆. လူအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ပါစေ
သင်ဟာ အလုပ်ခွင်မှာ လူအများနဲ့ မဖြစ်မနေ ထိတွေ့ ဆက်ဆံရတာကြောင့် လူတွေနဲ့ ပူပေါင်း လုပ်ဆောင်တတ်ခြင်းဟာလည်း လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပါပဲ။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်း ညီညီညွတ်ညွတ် ဆောင်ရွက်ကြခြင်းက လုပ်ငန်းရဲ့ ထုတ်ကုန်ကို နှစ်ဆတိုးမြှင့်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပျင်းရိလာတဲ့အခါ၊ ဖိစီးမှုများလာတဲ့အခါ လူတွေဟာ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် ကုန်ခန်းလာ တတ်ပါတယ်။ ဒါကို အဖြစ်မခံပါနဲ့။ အမြဲအလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မွေးမြူပါ။ ဒါဆို သင်ဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာ အမြဲတမ်း တက်ကြွလန်းဆန်းနေတဲ့ သူလို့ နာမည်ကောင်းရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈. မိမိ ပြောလိုက်တဲ့စကားကို အမြဲတည်အောင်ကြိုးစားပါ
ယုံကြည်မှုဆိုတာ အချိန်ကြာကြာ ဆောက်တည်ရတာမျိုးဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခါပျက်ပြားသွားရင်လည်း ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်တော့တာမျိုးပါ။
ဒီတော့ ကတိတည်သူတစ်ယောက်၊ စကားတည်သူတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ “တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး Laptop ၂ မျိုး”